June 19, 2019 - ThutaStar
ရောဂါရှိသူက စကားပြောရင် (၃)ေ ပ၊ နှာစေးချောင်းဆိုးရင် (၆)ပေအထိ ရောက်နိုင်တဲ့ H1N1 ရောဂါပိုးအကြောင်း….
ဘတ်စ်ကားစီးရသူတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကားကျပ်ကျပ်စီးရချိန်မှာ H1N1 တုပ်ကွေးပိုး ကူးစက်မှာကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဘယ်လို ဆောင်သင့်၊ ရှောင်သင့်တယ်ဆိုတာလေး ပြောပေးပါဦး ဆရာ။ အရေးကြီးတာက H1N1 ပိုးရှိသူပါပဲ။ ပိုးရှိမှန်း သူ့ကိုယ်သူ မသိရင် တောင် အနည်းဆုံးတော့ ဖျားနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဖျားတဲ့သူတွေက လူများတဲ့ နေရာတွေ […]
H1N1 ကူးစက်မြန်..ပြင်းထန် တုပ်ကွေး အဆုတ်ရောင်ရောဂါ… ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ…
လေမှ တစ်ဆင့် ကူစက်သော ကူးစက်မြန် ပြင်းထန် အဆုတ်ရောင် H1N1 တုတ်ကွေး Flu Virus (Swine Flu) ရောဂါပိုး တွေ့နေပြီလို့သိရပါတယ်။ အထူးသတိပြုဖို့လို့ လိုအပ်ပါတယ်။ H1N1 Flu ရောဂါ လက္ခဏာများ အဖျားတက်ခြင်း ချောင်းဆိုးခြင်း နှာရည်ယို နှာစေးခြင်း ခေါင်းကိုက်ခြင်း […]
“” ကင်ဆာရောဂါကြောင့် မသေနိုင်တော့ပါဘူး..တဲ့ “”
“ကင်ဆာကြောင့်မသေနိုင်ကြတော့ပါဘူး” ဒေါက်တာ HEAYTHY LIFE က ပြောတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ သေချာဂရုစိုက်ပေးနိုင်ရင် ဘယ်သူမှ ကင်ဆာကြောင့်သေစရာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့ပထမအဆင့်က သကြားလုံးဝ မစားပါနဲ့ ရှောင်ပါ အဲဒါကင်ဆာဆဲလ်က အလိုလိုသေသွားပါလိမ့်မယ် ဒုတိယအဆင့်က အစာမစားခင်မှာ သံပုရာတစ်လုံးကို ရေနွေးနဲ့ Blend လုပ်ပြီးသောက်ပါ( ၁)လ ကနေ သုံးလခန့် သောက်ပေးပါ […]
ဝေဠုကျော်က တဏှာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် အရမ်းဝါသနာပါတယ်လို့ အသံဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ဟလာတဲ့ သင်းသင်း…
ဝေဠုကျော်နဲ့ သင်းသင်းတို့ဟာ လက်ရှိမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဝေဠုကျော်ကို သင်းသင်းကတရားဆွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး အတူနေစဉ်ဖမ်းယူထားတဲ့ အသံဖိုင်ကိုလည်းတရားရုံးကို တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအသံဖိုင်ကို ဝေဠုကျော်ကသွင်းထားခိုင်းတာဖြစ်ပြီးသူဟာ တဏှာနဲ့ပတ်သက်ရင် အင်မတန်ကြီးကြောင်း ယခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်။ “သင်းသင်းက ပါးစပ်ပြောလည်း မဟုတ်ပါဘူး လေလည်း မဟုတ်ပါဘူး အဲ့တော့ တရားခံဖြစ်တဲ့ ဝေဠုကျော်က ကိုယ်တွဲလာတဲ့ ၆ လကျော် […]
တာဝန်မကျေတဲ့ သမီးတစ်ယောက်လို အမေစုဆီသွားရင်း ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ချစ်သုဝေ…..
ဒီနေ့ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးအထားရဆုံးသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီး အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့(၇၄) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာနေ့ရက်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေစုကို အရမ်းချစ်ကြတဲ့ လင်းလင်းတို့ မိသားစုတွေကတော့ အမေစုရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ နေပြည်တော်အထိသွားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သွားတွေ့ပြီး ဂါရဝပြုခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ အမေစုဆီသွားရင်း […]
သမီးဖြစ်သူရဲ့ မင်္ဂလာဦးည ဖြတ်သန်းပုံကို အမေဖြစ်သူ ကြားပြီး သတိလစ် ….
သမီးဖြစ်သူရဲ့ မင်္ဂလာဦးည ဖြတ်သန်းပုံကို အမေဖြစ်သူ ကြားပြီး သတိလစ် သမီးဖြစ်သူ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအပြီး အမေဖြစ်သူက “ သမီး မင်္ဂလာဦးည ဘယ်လိုဖြစ်လဲ အမေ့ကို ပြောပြ… ပြောရမှာ ရှက်ရင် စကားဝှက်သုံးပြီး စာပို့လိုက် ” ” ဟုတ် အမေ ” နောက်ရက်ကျ […]
အသားတု ဘယ်ကရသလဲဆိုတာ သင်သိပါသလား ….
အသားတုဟာ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ တော်တော်လေး အသုံးတွင်ကျယ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ လမ်းဘေးတုတ်ထိုးဆိုင်လေးတွေ၊ အကင်ဆိုင်လေးတွေကစပြီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးလေးနဲ့ ချက်ထားတဲ့ အသားတု ဟင်း ၊ အသားတုဗလချောင်ကြော်လေး စသည်ဖြင့် အသုံးတွင်ကျယ်လှပါတယ် ။ အသားတုကို မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက အာရှမှာ တော်တော်များများ စားကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတေ့ာ သက်သက်လွတ် ဟင်းပွဲတွေမှာ အများဆုံး […]
ကွယ်ရာမှာဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဇနီးချောကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်း…
ကွယ်ရာမှာဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဇနီးချောကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်း တက်ကီယိုစီရင်စု၊ ဘာတီခရိုင်၊ Trapeang Sab မြို့ငယ်လေးမှာ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ဇနီးဖြစ်သူကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ခဲ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်မှာ ခင်ပွန်းက ဇနီးသည် ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် …. ။ […]
“ဆီးပေါက်ရာမှာ ဆီးတစ်စက်ထွက်ဖို့ သေမလောက်ခံစားနေရတဲ့ ဆီးရောဂါသည်တွေအတွက် ဆေးနည်း”..
ဆီးရောဂါသည်တွေအတွက် လုံးဝကျော်မသွားသင့်တဲ့ စာလေးပါ။ ဆီးပေါက်ရာမှာ ဆီးတစ်စက်ထွက်ဖို့ သေမလောက်ခံစားနေရတဲ့ ဆီးရောဂါသည်တွေအတွက် ဆေးနည်းလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဆေး နည်း အုန်း သီး အနုတစ်လုံးကိုထိပ်ကဖေါက်ပြီးရင် ကျောက်ချဉ် ကွမ်းသီး လုံးမျှ အုန်းရည် ထဲထည့်(မိနစ်၃၀)လောက်စိမ် ဒါပါပဲပြီးရင်အကုန်း သောက်လိုက်တာပါပဲဗျာ စမ်း ကြည့်ကြပါပျောက်ရင်လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ ဆီး ဝေဒနာရှင် တို့ […]